प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष हो– भ्रष्टाचारीलाई टिपेर फालिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद र मर्मतमा १ अर्व ३२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाल एयरलाइनसका कार्यकारी सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रधानमन्त्रीले टिपेर फाल्न सक्लान् ? प्रधानमन्त्रीकै परीक्षा सुरु भएको छ ।
जहाज खरिद र मरमतका नाममा कमिशन खाने र शक्तिशाली दलका नेताहरुलाई कमिशन पुर्‍याएर निगम होइन आफै बलवान बन्नतिर लागेका कंसाकारले पहिले जहाज आलुप्याज किनेसरह किन्न पाउनुपर्छ भन्थे, कारण अहिले प्रष्ट हुनपुगेको छ– कमिशन खान पो रहेछ । सुगतरत्नले ध्वजाबाहकलाई डुबाउने भए ।
निगमले वाइड बडी ए ३३०–२०० एयरबस खरिद गर्दा नै कंशाकारले एक अर्व भन्दा बढि कमिसन खाएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै अन्य अर्को एक जहाज खरिद गर्दा ३० करोड र एउटा जहाज मर्मतका लागि सिङ्गापुरबाट इन्जिन ल्याउँदा २ करोड कमिसन खाएछन् । तैपनि कसैले किन कुरो उठाएनन् ? यो रहस्यमय विषय बन्न पुगेको छ । भनिन्छ, सबैले भागशान्ति भोजन गरेका छन् ।
तत्कालीन देउवा सरकारका साला भुषण राणा र श्रीमती आरजुको सल्लाहमा भ्रष्टाचार गरेको निगमका कर्मचारीहरु नै आारोप लगाउँछन् । भने २०६८ सालमा पनि कार्यकारी बनेका यिनलाई भ्रष्टाचारी भनेर निकालिएको थियो । पैसाकै चलखेलमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्टाएर यिनले पुन: नियुक्ती पाएका थिए । पैसाको चलखेलभन्दा अरु कारणले सम्भव नै थिएन । सुशासन र सम्पन्नताको कुरा गर्ने ओली सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ, देख्न पाइएला ?